खोटाङमा सार्वजनिक यातायातको पुरानै भाडादर, कहाँ जान कती ? हेर्नुहोस::समायोजन खबर
खोटाङमा सार्वजनिक यातायातको पुरानै भाडादर, कहाँ जान कती ? हेर्नुहोस
जिल्लामा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेकोमा चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला पुरानै भाडा दरलाई कायम राखिएको छ । जिल्लामा प्रशासनको पहलमा पुरानै भाडादर कायम गरिएको हो । असोज ९ गतेदेखि १० प्रतिशतले भाडा बढाएका यातायात व्यवसायी र प्रशासनको संयुक्त छलफल पछि पुरानै भाडादर कायम गर्ने सहमति भएको हो । नजिकिँदै गरेको विभिन्न चाडपर्वलाई मध्येनजर गर्दै यात्रुलाई सहज होस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले बताए ।
हेर्नुहोस कहाँ पुग्दा कती लाग्छ भाडा
बसबाट दिक्तेल–काठमाडौंँ आवतजावत गर्न साविककै भाडा दर १ हजार २ सय, दिक्तेल–कटारी ८ सय, दिक्तेल–इटहरी १ हजार १५०, दिक्तेल–धरान १ हजार १७५, दिक्तेल–बिराटनगर १ हजार १७५ र दिक्तेल–काँकडभिट्टाका लागि १ हजार ३५० रुपैयाँ कायम भएको छ । जिल्लाका आन्तरिक सडकमा चल्ने सवारी साधनको भाडादर पनि पुरानै कायम गरिएको साझा खोटाङ यातायात प्रालिका व्यवस्थापक मिलन चामलीङले बताए ।
जीपबाट दिक्तेल–काठमाण्डौंका लागि साबिकको भाडामा पनि ५० रुपैयाँ घटाएर एक हजार ४ सय कायम गरिएको छ । दिक्तेल–धरानका लागि एक हजार ६ सय, दिक्तेल–इटहरीका लागि १ हजार ५५०, दिक्तेल–बिराटनगरका लागि १ हजार ६५०, दिक्तेल–कटारीका लागि एक हजार, दिक्तेल–लहानका लागि १ हजार २ सय, दिक्तेल–बाक्सिलाका लागि ८ सय, दिक्तेल–ऐसेलुखर्कका लागि ८ सय, दिक्तेल–हलेसीका लागि ४ सय र दिक्तेल–निर्मलीडाँडाका लागि ४ सय भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
२०७५ असोज १५ बिहान ९ : २९ मा प्रकाशित